IVirustotal.com ihlalutya iifayile ezine-antivirus ezahlukeneyo, kwi-Intanethi, simahla nakwiSpanish | Iindaba zeGajethi
QKwenzeka ntoni xa sinefayile ekrokrisayo kwaye asiyithembi ngokupheleleyo i-antivirus yethu? Okanye xa umntu esixelela "i-antivirus yam ithi inentsholongwane" kwaye eyakho ayiyiboni. Ngaba ungathanda ukukwazi ukuhlalutya le fayile ngeenkqubo ezahlukeneyo ze-antivirus ezingama-32, ngaphandle kokufaka nantoni na simahla?. Ukuba impendulo yakho nguewe, qhubeka ufunda.
RKuya kuvela ukuba okwethutyana ndibeke umdlali yedwa Injongo yeClassic kuba ngemini yakhe kwavela impikiswano apho kwathiwa lo mdlali unentsholongwane, mna Ndihlalutye ifayile "aimp_full.exe" kunye ne-antivirus ezininzi kwaye andifumananga nto. Kodwa abasebenzisi abaninzi baqhubeka nokubanga ukuba le fayile iqulethe ihashe leTrojan kwaye njengoko ndicinga ukuba kufanelekile ukuyibeka fakela zonke ii-antivirus nganye nganye Ukuqinisekisa le ngxelo, ndigqibe kwelokuba eyona nto intle iya kuba kukukhupha isilumkiso sokhuseleko kwaye wonke umntu azenzele isigqibo sokuba angayifaka na le software okanye hayi.
EInyani yile, njengezinye izinto ezininzi, uhlalutyo olutsha lwalo mdlali belulindele ukubona indlela umxholo ovele ngayo. Ndaqala Ukuhamba kancinci Kwaye ndiyifumene VirusTotal.com inkonzo online, mahala, kwi español, kwaye apho unokuhlalutya nayiphi na ifayile ekrokrelayo kunye nee-injini ezahlukeneyo ezingama-32 ezikhoyo ngoku. Olu luhlu olupheleleyo lwe-antivirus ngoDisemba 12, 2007:
NJALO (Avast! Intsholongwane)
Isiqinisekiso (Umyalelo weAntivirus)
Iinkonzo zeComputer (Ukunyanga ngokukhawuleza)
Ugqirha Webhu, Ltd. (DrWeb)
Isoftware ka-Eset (I-ESET NOD32)
uthungelwano lwe-ewido (i-ewido anti-malware)
Isoftware ye-FRISK (F-Prot)
Isoftware ye-Ikarus (ikarus)
IKaspersky Lab (YLL)
IMicrosoft (uKhuseleko lweMalware)
Norman (UNorman Antivirus)
Ukhuseleko lwePanda (IPanda Platinum)
Ukunyuka kweAntivirus (Ukunyuka)
Ikhompyuter ekhuselekileyo (Uvimba wewebhu)
Isoftware yeLanga (Intsholongwane)
Symantec (Norton Intsholongwane)
Aewe masibone isebenza njani iVirus Total Kwaye xa sidlula siza kuthatha ithuba lokuhlalutya inguqulelo yamva nje yeAimp Classic kwaye sibone ukuba iyayifumana na intsholongwane efihlakeleyo okanye iTrojan.
1) Yiya ku VirusTotal.com kwaye ucofe kwiqhosha "Vavanya" ukufumana ifayile ofuna ukuyihlalutya. Umzekelo ndiza kusebenzisa ifayile ephunyeziweyo "Aimp_2.08.2.exe" Inguqulelo yamvanje yeAIMP. Xa uyifumene, cofa kwiqhosha eliluhlaza "Thumela ifayile".
2) Ifayile izakuqala ukunyuka ukuya kwiNtsholongwane iyonke. Ixesha lokulayisha liya kwahluka ngokobungakanani befayile ofuna ukuyihlalutya, umthwalo wenethiwekhi kunye nesantya sonxibelelwano lwakho.
Kuxhomekeke kwinani leefayile iVirus iyonke ehlalutya ngelo xesha, baya kukufaka umgca apho kuya kufuneka ulinde imizuzwana embalwa kude kufike ixesha lakho lokuhlalutya ifayile yakho.
3) Xa inkqubo yohlalutyo iqala, ifayile iya kuhlalutywa nganye ii-injini zokucoca iintsholongwane ezikhoyo ngelo xesha kwiVirus iyonke. Okwangoku zingama-32, emva kwemizuzu embalwa uluhlu olupheleleyo luya kuvela nazo zonke ii-antivirus ezisetyenzisiweyo, iinguqulelo zazo kunye nomhla wohlaziyo lokugqibela. Njengoko ubona emfanekisweni, enye ye-antivirus, i VBA32 Uye wafumanisa «Kurhanelwa iTrojan-PSW.Game.23 (paranoid heuristics)«.
Olu bhaqo aluqondwanga yiTrojan kwiziko ledatha, kodwa yi Uhlalutyo lwelifaNgamanye amagama, ukusebenzisa ubuchule obuthile "uyathandeka" okanye uyala ukuba emva kwefayile PSW.Game.23 iTrojan. Izigqibo zohlalutyo lomhlaba akufuneki ukuba ziyinyani Iziphumo kufuneka zithathwe ngononophelo.
4) Ekupheleni kwenkqubo uya kufumana isishwankathelo malunga nohlalutyo kunye Ipesenti yokufumanisa okuqinisekileyo ifunyenwe, oko kukuthi, zingaphi i-antivirus ezingama-32 ezifumene into enobungozi kwifayile.
Y kuko konke. Njengoko ubona, kuluncedo kakhulu ukukwazi ukuhlalutya ifayile kunye neenkqubo ezininzi ze-antivirus ngaphandle kokufaka nantoni na. Kwimeko endiyisebenzisileyo njengomzekelo, sifumene iTrojan, kodwa i-antivirus enje IBitdefender, iMcAfee, iKapersky, iPanda kunye neNorton abafumananga nto.
QKufuneka wenze ntoni kwezi meko? Into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba akukho antivirus efumana zonke iintsholongwane kwaye ke, nokuba uhlalutyo oluqinisekileyo aluveli, oku akuqinisekisi ukuba ifayile ayinayo intsholongwane. Kwaye into yesibini kukuba kufuneka silumke xa sifaka iinkqubo kwiikhompyuter zethu. Ukuba unokuthandabuza nakancinci malunga nesoftware, sukuyifaka ukuba unayo enye indlela. Andizukusebenzisa okwangoku Injongo yeClassic. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » IVirustotal.com ihlalutya iifayile ezine-antivirus ezingama-32 ezahlukeneyo, kwi-Intanethi, simahla nakwiSpanish
Esi sixhobo siza kuza siluncedo kum, zezo fayile zithunyelwe ngeposi okanye ngokuthumela imiyalezo ngokukhawuleza ukuba unamathandabuzo.
Enkosi kwaye konke ku
Kwaye ukuze ihlalutye i-PC iphela, akukho ndlela, akunjalo?
@Kamps yenye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu kule nkqubo.
I- @komoloves iyonke intsholongwane iskena iifayile ezizodwa, ukuskena yonke i-pc yenza uphando kuGoogle "kwi-antivirus ekwi-intanethi" kwaye uya kufumana izisombululo ezifana neepanda kunye nesimahla.
Ngeliphandle, kuthatha ixesha elide, andibathembi, ngoKaspersky kulungile kum, khange ndibenangxaki
Cwaka, uthetha ukuthini kanye kanye, awubathembi, antivirus?
Ewe, uNod32 ibanele kum 🙂
Kodwa yiza, iipesenti ezingama-90 zokufumanisa i-antivirus yinto eqhelekileyo. Abahlobo bakho abayi kukuthumelela umfanekiso weenwele zabo ezintsha, yiza kwi-XD
Icala elisezantsi kukuba ayivumeli iifayile ezinkulu kakhulu (ndizamile ukuhlalutya enye yee-megabytes ezili-15) kwaye nokuba ndijongeka kangakanani, ayibeki mda uvunyelweyo ...
Nditsho ukuba andiyithembi i-antivirus ekwi-intanethi, kodwa ukuba ndingashiyi nto ngethuba, ndiza kuyizama. 😀
Isithuba esigqwesileyo, sicaciswe kakhulu, ndibathanda ngaloo ndlela!
Ngokumalunga nesixhobo, kujongeka kulungile, ekuphela kwento endiyibonayo kukuba kuthatha ixesha elide kuhlalutyo, njengoko besitsho ngentla, ndikhetha ukuba ne-antivirus elungileyo ekuhlaleni kwaye yiyo, ayizukuba yeyona ikhuselekileyo into emhlabeni kodwa ubuncinci iyakhawuleza. ngokubhekisele!
Unyanisile Pk_JoA okwenzekayo kukuba ngamanye amaxesha kunzima kakhulu ukugqiba ukuba umxholo unokuthenjwa na okanye hayi.
@Rb Unyanisile khange ndibubone ubungakanani bobona bukhulu nokuba.
@ cwaka kwe-antivirus awunakuthembela kwi-100% kodwa kuya kufuneka uyisebenzise.
@Pablo esi sixhobo siluncedo ukuhlalutya iifayile manqaphanqapha, xa unamathandabuzo ngokhuseleko lwabo kwaye ufuna "uluvo lwesibini".
Ukubulisa kubo bonke.
Ewe, umbono awukho mbi, ngakumbi ukuba simahla, nangona umbuzo wokuthintelwa kokulayishwa kweefayile ezinzima kuya kuba kungenxa yokuba banomsebenzi omninzi malunga noko bakuthumeleyo okanye ngenxa yokuba beqalisile, ukuba bendinako ingacebisa ukuba ukongeza kuhlalutyo banokuluhlambulula okanye kwiimeko ezintle bahambise izisombululo ezincinci zomonakalo obangelwe ziintsholongwane, ngelishwa, esele zisebenza kwi-pc yethu.
i-augus, nangona kunjalo, ezona fayile ziphikisanayo zihlala zilinganisela ii-megabytes ezimbalwa. Unyanisile malunga nezisombululo ezincinci, kukho ezinye, kodwa azonelanga.
kwaye ungayicima ifayile eyosulelekileyo?
AyingoYesu kuphela okwazisa ngokosuleleka kweefayile, ukuba uyabona ukuba umntu wosulelekile uyayisusa kunye nexesha, ayizezinto ezifakiweyo.
BONKE BUXOKI OBUTSHA IINTSHOLONGWANE ENDALA